Hostels Mety tsy manana ny trano fandraisam-bahiny frills izay manolotra. Noho izany dia mety ho tsy kafe milina ao an-trano, tsy misy savony maimaim-poana, na ny vata fampangatsiahana anao. Dia tsy akory izay mahazo maimaim-poana towels. Fa ny sasany raha ny marina tranom-bahiny mivarotra savony sy ny zavatra hafa ilaina amin'ny vidiny mora. ary azo antoka, ianao dia tsy mety manana ny Dresser na ny efi-tranonao in nizara efi-trano, nefa tsy mety mankatò manana fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana izay afaka mitahiry ny zavatra. Mety mila mitondra ihany anefa padlock. Raha ny kitapo lehibe loatra ary rehefa checkout, mbola te hanao ny sasany minitra farany hizaha, afaka hamela ny kitapo amin'ny fivarotana ny entana.
Okay, azo antoka, ianao dia mety tsy hahazo ny fiainana manokana ihany ianao rehefa any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Misy faritra kaominina toy ny efitra fandroana, lakozia, faritra fandraisam-bahiny, sy ny toeram-piasana. Na izany aza, izao no fomba tsara mihaona ny olona. Raha mihantona eo amin'ny faritra kaominaly afaka mihaona mpandeha avy manerana izao tontolo izao. Ary na dia manan-danja namana manomboka amin'ny olona mihaona aminao amin'ny diany ary ho avy vaovao Travel buddies, koa! Ny olona izay miasa ao amin'ny tranom-bahiny matetika mahafinaritra sy hampahasosotra ny olona, noho izany dia tsara ny mahazo mifampikasokasoka sy mifanerasera aminy, ihany koa.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)